Isihloko sendaba yethu yanamuhla sithi "Ukuklama kwendawo yangaphakathi: igumbi lokulala, igumbi lokuphumula".
Abaqambi bangaphakathi baqaphela ngokucophelela ukwakhiwa kwekamelo lokulala kanye negumbi lokuphumula. Ingaphakathi lala makamelo kufanele icabangele ukuthanda nokudinga ilungu ngalinye lomndeni futhi livumelane nokuklama kwamanye amakamelo ekhaya lakho. Igumbi lokuhlala elikhanyayo nelinenkululeko lizoshiya izimnandi ezivakashile ekuvakasheleni endlini yakho futhi lizosebenza njengekhoneni lokududuza nokufudumala, lapho kuhle ukuqoqa nokuchitha isikhathi nomndeni wonke. Ngakho-ke, lapho uhlela izinto zokwakhiwa nezokuhlobisa kuleli gumbi, zama ukufaka kuwo umoya wokuzondeka nokududuzeka.
Ingxenye ehlukile futhi ebaluleke kakhulu yale phrojekthi yiklamo yokulala ekamelweni. Emva kwakho konke, ephusheni umuntu uchitha cishe isigamu sempilo yakhe! Amaminithi amnandi ngaphambi kokulala, achitha isikhathi sokufunda incwadi noma ukubukela i-TV, isikhathi esithile esikhethekile nesingcwele sokuvusa, ukuphumuza ukuphumula emini kwenta igumbi libe yingxenye ekhethekile yokuphila komunye wethu. Ukubaluleka okubalulekile akuyona nje indawo yombhede, kodwa futhi uhlotsheni ngalunye oluhlotshisiwe - ukukhanya okukhethiwe kahle nemibala, umhlobiso wamafasitela nezindonga, ngoba inhlanganisela yabo eyenza uhlaziye ekamelweni lakho. Indawo ephumayo egumbini ingahlushwa isibani sasebusuku, inikeze ukukhanya okuncane, okukhanyayo. Isibani esisezingeni lesibhakabhaka sizohlobisa izindlu zokulala eziningi zanamuhla. Endaweni yokuzilibazisa ungayifaka i-aquarium, ngoba sekuyisikhathi eside sekuyaziwa ukuthi ukubukela izakhamuzi zayo kugxila futhi kunika umuntu umuzwa wokuthula nokulondeka.
Igumbi lokuphumula liyisisekelo semisebenzi eminingi, kunezigaba eziningana eziyinhloko kulo. Nakuba okokuqala igumbi lokuphumula lakhulelwa njengendawo yemihlangano yebhizinisi kanye nezingxoxo, okwamanje amakamelo aphilayo amaningi kufanele ahambisane nezinye izindlela zokusebenzisa. Ukubukwa komndeni kwefilimu, indawo yokubhekwa kwezivakashi ngesikhathi samukelwa izivakashi, indawo yokudlala, itafula lekhadi, ama-sofa athambile - konke lokhu kungenza indawo yangaphakathi. Kuhle uma kukhona imithombo emincane yokukhanya egumbini lokuphumula. Indawo esebenzayo, esebenzayo ingakhanyiswa ngukukhanya okuklanyelwe ngaphakathi kwe-fluorescent noma umklami, kuvumelaniswe ngokuhambisana namathoni ajwayelekile egumbini lokuphumula. Kuwo wonke ama-multi functionality, kufanele kube khona isikhala samahhala ekamelweni. Ungahlanganisi igumbi lokuphumula ngefenisha elibukhali, kungcono ukusebenzisa ifenisha yekhabhinethi yobukhulu obukhulu. Igumbi lokuhlala eliphambili lizokuvumela ukuba ubambe ubusuku bokudansa nemincintiswano ehlukahlukene yezingane zaselula. Izindonga zendawo yokudweba yindawo enhle yokubeka imisebenzi yobuciko kubo: imidwebo, ukufaka, ama-collage kanye nama-embroideries. Kuhle kuhlanganiswe nekamelo langaphakathi lekamelo kanye nomoya jikelele wendlu, imidwebo igcizelela ukunambitheka kwakho okuhle kanye nekhono lokuzungezile ngezinto ezinhle nezokuqala. Enye inguqulo ye-classic yokuhlobisa indawo yokulala i-floor and table tables for izimbali. Abakhiqizi banamuhla banikeza ukukhetha okubanzi phansi, udonga, izitshalo zedeskithophu nezimbali, ezenziwe ngezinto ezihlukahlukene. Izitayela eziningi nemibala ikuvumela ukuba uthathe i-vase kunoma yikuphi ukuhluka kwegumbi langaphakathi. Zonke izinto egumbini lokuphumula kufanele zihambisane nenhloso kanye nemvamisa yokusetshenziswa kwazo, ukulungisa isikhala ekamelweni - enye yemisebenzi ebaluleke kakhulu yomklami.
Izitayela zakamuva ekwakhiweni kwegumbi lokuphumula nekamelo lokulala libonisa ukusetshenziswa kwezinto zemvelo ekuklanyeni kwayo. Izimbali eziphilayo kanye nama-eekbans avela kubo, ifenisha ezivela efayeleni lezinkuni, ama-bamboo namagundane enhlanga, izikhumba zezilwane, ama-herbariums - konke lokhu kuzosiza ukwakha ingaphakathi eliyingqayizivele nelithakazelisayo lamakamelo. Kunezinketho eziningi zokuxazulula isisombululo sombala, ngokuvamile kuvamile, imibala elula futhi elula. Ukuwasebenzisa, ubonisa ngokubonakalayo usayizi wekamelo. Iphelele ngephokoledi yangaphakathi, ukhilimu, i-violet ne-shades yegolide yombala. Into esemqoka ekudaleni ingaphakathi kungukuthi ukhululekile futhi ukhululekile uzozizwa uma ukhona. Uma ufuna ukufezekisa okufanelekile, ukwanelise zonke izidingo zakho, umphumela wokwakhiwa kwamagumbi, khona-ke ubeke umklamo wangaphakathi: igumbi lokulala, igumbi lokuphumula ochwepheshe abafakazelwe emkhakheni wezakhiwo zangaphakathi.
Ingaphakathi lendlu ngesitayela se-rococo
Ingaphakathi lwanamuhla e-bungalow isitayela
Zonke izitayela zefenisha zendawo ngaphakathi
Ukukhanyisa endlini yokugezela
Iphephadonga eliphathekayo: ukubuka kabanzi imibala ethandwayo nemibala
Isifuba - umzimba omuhle wesifazane
Izwe elihle kanye nokuxhumana kwi-inthanethi
USergei Lazarev wahlabelela nezingane eziningi, ividiyo
Ukuziphatha okuhle ngesikhathi sezulu esibanda
Ingabe lo muntu udinga ububele nobubele?
I-Pepper eyayigcwele imifino
Indlela yokukhetha i-beautician enhle?
Ithonya lekhompyutha kumuntu womuntu
Ukusetshenziswa kwelamula ukuze isisindo siphume. Lahla isisindo ngelamula bese uphuza nayo
Ukukhetha kwewayini elibomvu akuyona umsebenzi olula
Ukwelashwa okungewona wendabuko ye-varicose veins